Kusukela sihloko sizofunda indlela ukwandisa amathuba akho okuthola abakhulelwe. Kuleli zwe lanamuhla, kakhudlwana futhi ukungazali kwande noma kukhona izinkinga kanye nokukhulelwa. Ngezinye izikhathi ngisho umbhangqwana ephelele akakwazi ukuba ingane isikhathi eside. Ngakho abesifazane cabanga amathuba anda sokuhlala kwesisu nobe ngasiphi sikhatsi. Yini amasu athandwa kakhulu? Izimfihlo ezilandelayo kanye nezincomo kuzosiza ukuthuthukisa amathuba ngeminyaka abaye bakhulelwa. Ezinye zazo yilezi kuphela inganekwane, kodwa amantombazane kuphela uma ithanda ukusilandela kubo. Ukusebenzisa iyiphi into kancane ukuthi inamathuba kancane nokwanda amathuba ngeminyaka abaye bakhulelwa.
Inkinga yokuqala ezibhekene abesifazane - ukukhethwa okubizwa ngokuthi usuku kwesokudla. umzimba Female has a idivayisi oyinkimbinkimbi kakhulu. Nyanga zonke uyahamba umjikelezo ogcwele - lena yinkathi ephakathi nezikhathi. Futhi kule nkathi yesikhathi kulezinto okumele zenziwe. Kulokhu, amathuba okuthi ukhulelwe akuhlali kutholakala. Ngokwesibonelo, kukhona umbono ukuthi phakathi nezinsuku ezibucayi, ungakwazi ungesabi yokukhulelwa. Ngakho-ke, odokotela baxwayisa ngokuthi uma umuntu wesifazane ufuna ukwazi indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe, kubalulekile ukukhumbula - ezinsukwini ezingu-1-2 kuphela ngenyanga efanelekayo nje ebamba isisu. Zibizwa ngokuthi ama-ovulation.
Kwakucatshangwa ukuthi ubuhlobo bobulili ngaphandle ukuvikelwa ngazo zonke izikhathi kungaholela sokukhulelwa. Kuphela nge-ovulation amathuba ukwandisa kuya esiphezulu. Ngenxa yalokho, kubalulekile ukubala lapho isikhathi asebenzayo iza. Ngokuvamile, kungcono phakathi umjikelezo wokuya esikhathini. Cishe ezinsukwini ezingu-14 lapho kuqala izinsuku ezibucayi nge-ovulation. Zama ekuhlanganeni kobulili ngaphandle ukuvimbela inzalo lathethwa ngale nkathi, futhi izinsuku 1-2 ngaphambi. Ukwenza lula isinqumo nge-ovulation ukuhlolwa akhethekile yaklanywa. Bazokusiza ukuthola "usuku X".
Ngesikhathi usuku kwesokudla
Lena akuyona indlela kuphela kuyasiza ukwandisa amathuba okukhulelwa ingane. Abantu yasungulwa ngezindlela eziningi ukuxazulula le nkinga. Indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe ngesikhathi nge-ovulation? Izinketho eziningi. Indlela ephumelela kakhulu futhi kungase kutholakale indlela - ngokuthatha amavithamini. Ngaphezu kwakho konke, i-folic acid. Qala awaphuze izinyanga mayelana 1-2 ngaphambi sokukhulelwa okuhleliwe. Kungumqondo omuhle ukuthi umlingani wakho siwasebentise. Kusuka umbono wezokwelapha lena kuyindlela ephumelela kunazo zonke, sandise namathuba. Noma kunjalo, amantombazane alethe amathiphu okuningi ezokwenza okuthiwa ukusiza ukwandisa amathuba okuthi nje ebamba isisu. Ezinye ongakhetha kuphela inganekwane, kodwa namanje uye walandela ngempumelelo wesifazane. Ziyini lezi amathiphu?
Uma ucabanga ukuthi ukwandisa amathuba akho okuthola ukhulelwe, ulungele lokho onakho prodelyvat izenzo ezihlukahlukene. Amanye amantombazane ukunikela emva kocansi olungaphephile ukwenza "birch". Ngakho ngokucophelela, ngaphandle kokuthola embhedeni emva kocansi kuyadingeka ukukhulisa ukhalo. Kungcono uyiphonse phansi ngasezinyaweni zakhe phezu kodonga. Linda kulesi sikhundla imizuzu eminingana. Mhlawumbe kuzwakala silly, kodwa le ndlela owenza ukusiza abanye. Isidoda akukabikho masinyane oluphuma esithweni sangasese, okuyinto kwandisa amathuba okuthi nje ebamba isisu. Nokho, odokotela basikisela ukuthi akuyona kumele-do "birch". Kunalokho, nje ngokwanele ukuba alale okhalweni lwakhe kancane aphakeme (walibeka emcamelweni wakhe) imizuzu 20-30. Le nqubo ingaphansi esiyingozi futhi Akudingi umzamo.
Uma ucabanga ukuthi ukwandisa amathuba akho okuthola ukhulelwe, uzwa iseluleko on ukukhethwa isimo lesifanele lelisho kulalana. Kunconywa ukuthi yowesifazane ezansi. Kukholakala ukuthi le ndlela kuyinto ekahle nje ebamba isisu. "Isithunywa Sevangeli" ukuma - inketho ekahle.
Noma kunjalo, abanye besifazane basikisela ukuthi lokhu akuyona indlela kuphela ukuthuthukisa amathuba nje ebamba isisu. It kufanela yimuphi ukuma anokungena ezijulile wenduku esithweni sowesifazane. Bathini kuleli phuzu, odokotela? Baye bafika kusiphi isiphetho ukuthi owesifazane uyakwazi ukhulelwa yisiphi isimo. Vele uzame acabangele imithetho yemvelo. Isikhundla lapho owesifazane phezulu, asifanele kakhulu yokuthuthukisa amathuba okukhulelwa. Amandla Luhambo ngokushesha ukunikeza isivuno ingqikithi uketshezi kwesidoda oluphuma esithweni sangasese, futhi ngeke kuphela ukwehlisa ematfuba nje ebamba isisu.
Akuwona wonke umuntu ungathola abakhulelwe bebodwa. Ngesinye isikhathi kuyadingeka ukuba afeze IVF. Lokhu insemination yokufakelwa. inqubo eqolo kodwa ngempumelelo kakhulu. Indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe nge IVF? Akukho algorithm ngqo yezenzo. Kunconywa ukuthatha zonke izindlela ukuthuthukisa amathuba sokuhlala kwesisu kokukhulelwa evamile. Futhi ngenxa yalokho, odokotela abaningi batusa ukuthatha kavithamini D. Indlela ukwandisa amathuba okuthola okhulelwe IVF ngolokuqala uzame? Cishe ngemva kwenyanga ukuqala ukuphuza amaphilisi vitamin D noma amaphilisi. Ngaphezu kwalokho, zama ukudla ngaphezulu ukusetshenziswa amaqanda inkukhu namafutha cod kwesibindi. Oyster, inkukhu umucu kanye kwasolwandle imikhiqizo, inyama - konke lokhu kuzomele ungene ekudleni kwakho. Ngaphezu kwalokho, njalo nje. Kulokhu, ungalindela okuphumelela kokukhulelwa.
Indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe nge endometriosis? Abesifazane abaningi babuza lo mbuzo. Ngokuvamile, njengoba ukwelashwa okunjalo ayidingekile. Cishe ingxenye yabo bonke abesifazane kwathiwa unesifo "endometriosis" bakwazi ukuba akhulelwe ingane ngaphandle ngidlula Yiqiniso ekhethekile kokuvuselelwa emzimbeni. Nokho, ukuthuthukisa amathuba ukukhulelwa, ungasebenzisa enye inqubo. Kungcono hhayi ukuqala ngaphandle kokukhuluma nodokotela.
Udinga baphuze inkambo ejenti hormone kakhulu kukhanselwe. Ngenxa yalokho, wenzalo kwandisa. Kodwa kuphela ngesikhathi esithile. ke Kuyancomeka ukuvumelana nazo zonke udokotela. Ukutshela ukuthi lapho kudingeka ubuhlobo bobulili ngaphandle inzalo. Yikuphi izidakamizwa kuyabekwa avame? Okokuqala, izinto zokuvimbela inzalo ngomlomo. Ungasebenzisa noma isiphi, kodwa kungcono ukuze ukhethe ngazinye wezifo zabesifazane yakho. Okwesibili, ama-ejenti hormone. Ethandwa kakhulu kuba "Djufaston". Kuphela inkambo ngokuthatha amaphilisi - futhi sandise amathuba lokukhulelwa ngisho ne endometriosis!
Indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe nomunye tube? Akuyona esivamile, kodwa umkhuba namanje kwenzeka. Ngokuvamile tube fallopian isusiwe emva kuhlulekile ukhulela ethunjini. Ngemva kokuhlinzwa, udinga nguhhafu thembeke uvinjelwe. Futhi kuphela ke ungakwazi cabanga okwandisa amathuba ngeminyaka abaye bakhulelwa.
Kunconywa ukuba uqale ukuthola ukuthi yini ombangela ukukhula komntwana ethunjini okokugcina. Yiqiniso, kubalulekile ukuqeda le ukuphazamiseka. Qedela Yiqiniso egcwele inhlolovo futhi nginikeze zonke cwaningo (nomlingani), ukuqinisekisa impilo yabo. Uma wenza lokhu, ungakwazi ucabange indlela ukwandisa amathuba ngeminyaka abaye bakhulelwa. Uma owesifazane enezinwele tube fallopian eyodwa kuphela, kungcono ukuba ulinge. Vele zama ukugxila nge-ovulation, baphuze i-folic acid futhi waphila ukuphila ocansini njalo.
Indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe amawele? Babembalwa abantu abakhulelwa babe angaphezu kuka 1 ivumela umntwana ngesikhathi. Uma ufuna ukwandisa amathuba okuthi amawele, kuhle ukucabangela ezinye izici ukuthi ukuhlukanisa ososayensi. It is wafakazela ukuthi ematfuba lokukhulelwa izingane eziningi ngesikhathi esisodwa idluliselwa zofuzo. Ngamagama alula, uma umndeni owayesevele ngizale amawele, amathuba akho ukwandisa. ke Kuyancomeka ukuba ukufuna umlingani nababe ku amawele komama noma zoyise noma amawele. Ubudala futhi ine ithonya. Omdala owesifazane, ayanda namathuba okuba lokukhulelwa amawele. Ngakho-ke, ngeke ukwazi ugijimele nale nqubo.
Indlela ukwandisa amathuba okuthi ukhulelwe? Lapho insemination kuyinto awokuthi ukuzalwa kwamawele kuyisenzakalo. Ngakho-ke, uma uhlela inqubo efanayo, ungalungisa ngokwakho yokuthi uzoba ingane ezimbili nje. Akunjalo ngempela, kodwa kungenzeka ukuthengiselana okunjalo. Kuphakeme kunokuvamile, kokukhulelwa zemvelo.
Yini okunye okufanele banake? Manje ngiyaqonda ukuthi ukwandisa amathuba ngeminyaka abaye bakhulelwa. Yilokhu kuphela hhayi zonke. Abantu futhi imithi, zikhona izindlela ezihlukahlukene, okuyinto kufanele ukusiza ukuxazulula inkinga. Lokho kufanele sinake?
Okokuqala give up imikhuba emibi ethile kwaze kwaphela unyaka nesigamu ngaphambi uhlela ukukhulelwa. Utshwala kanye nogwayi asevaliwe. Ngisho ugwayi electronic akufanele avele ezandleni zakho. Lokhu kusebenza futhi umlingani wakho. Esigabeni esilandelayo - ukudla. Kuyadingeka ukusungula. Kungcono ukuqala ukudla nati ukhilimu omuncu. Inyama yenkomo esethinini zifakwe ekudleni kwakho. Ngaphezu kwalokho, zama ukudla ukudla okunempilo kuphela. Le nqubo kuzosiza enothisa umzimba wakho ne amavithamini namaminerali. Vele yini edingekayo ukuze umuntu ekhulelwa!
Gcina ukuphila ocansini njalo. Kodwa Ungeqisi it! Kuyinto efiselekayo ukuqhuba izenzo zocansi ngenhloso wokukhulelwa mayelana zonke izinsuku 2. Anjalo ngokuvamile isixazululo siyasebenza kakhulu. Avamile, kodwa akukho-frills ukuphila ocansini kwandisa amathuba okukhulelwa. Enye kancane iseluleko - ithawula ikhofi kanye namandla iziphuzo. I-caffeine kancane emzimbeni wakho, ngcono.
I-Bayonet-umese izikhathi zesiJalimane iWWII: amanani, izithombe